5 Afei anuanom, nna ne mmere no ho de,+ enhia sɛ wɔkyerɛw biribiara brɛ mo. 2 Na mo ankasa munim yiye sɛ Yehowa da+ no reba sɛnea ɔkorɔmfo ba anadwo no ara pɛ.+ 3 Sɛ enya ba sɛ wɔreka+ sɛ: “Asomdwoe+ ne dwoodwoo!” a, mpofirim ara na ɔsɛe+ bɛba wɔn so sɛnea awoko yaw ba ɔbea a ɔyem so;+ na wɔrentumi nguan ɔkwan biara so.+ 4 Nanso, mo anuanom, munni sum mu,+ monte sɛ akorɔmfo+ na saa da no abɛto mo mpofirim, 5 efisɛ mo nyinaa yɛ hann mma+ ne adekyee mma.+ Yɛnyɛ adesae anaa esum dea.+ 6 Ne saa nti, mommma yɛnnna+ te sɛ wɔn a aka no,+ na mmom momma yɛnwɛn+ na yɛn ani nna hɔ.+ 7 Efisɛ wɔn a wɔda+ no taa da anadwo,+ na wɔn a wɔbow nsa no taa bow anadwo. 8 Nanso yɛn a yɛyɛ adekyee dea no, yɛmma yɛn ani nna hɔ, na yɛnhyɛ gyidi+ ne ɔdɔ nkatabo+ ne nkwagye anidaso+ no sɛ dade kyɛw;+ 9 efisɛ Onyankopɔn anyi yɛn amma abufuw,+ na mmom oyii yɛn sɛ yɛmfa Awurade Yesu Kristo+ so nnya nkwa.+ 10 Owu maa yɛn,+ sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛn ani gu so oo, sɛ yɛada oo, yɛne no bɛtena nkwa mu.+ 11 Enti monkɔ so nkyekye mo ho mo ho werɛ na monhyehyɛ mo ho den,+ sɛnea moreyɛ no ara.+ 12 Afei anuanom, yɛsrɛ mo sɛ momfa obu mma wɔn a wɔyɛ adwumaden wɔ mo mu na wodi mo anim+ wɔ Awurade mu na wotu mo fo no; 13 na momfa nidi soronko mma wɔn ɔdɔ mu esiane adwuma a wɔreyɛ no nti.+ Mo ne mo ho mo ho ntena asomdwoe mu.+ 14 Bere koro no ara mu no, anuanom, yetu mo fo sɛ monkasa nkyerɛ wɔn a wɔnenam basabasa,+ monkyekye akra a wɔahaw werɛ,+ mommoa wɔn a wɔyɛ mmerɛw, munnya abodwokyɛre+ mma nnipa nyinaa. 15 Monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne so ka,+ na mmom bere nyinaa monhwehwɛ nea eye mma mo ho mo ho ne afoforo nyinaa.+ 16 Mo ani nnye bere nyinaa.+ 17 Munnnyae mpaebɔ da.+ 18 Biribiara mu momfa aseda mma.+ Eyi na Onyankopɔn pɛ wɔ mo fam Kristo Yesu mu. 19 Munnnum honhom no gya no.+ 20 Mummmu nkɔmhyɛsɛm animtiaa.+ 21 Monsɔ ade nyinaa nhwɛ;+ munkura nea eye mu pintinn.+ 22 Montwe mo ho mfi bɔne biara ho.+ 23 Asomdwoe Nyankopɔn+ no ara ntew mo ho koraa.+ Na wɔnkora mo honhom ne mo kra ne mo nipadua so mma enni mũ akwan nyinaa so, sɛnea asɛm remma ho yɛn Awurade Yesu Kristo mmae mu.+ 24 Nea ɔrefrɛ mo no yɛ ɔnokwafo, na ɔbɛyɛ nso. 25 Anuanom, monkɔ so mmɔ mpae mma yɛn.+ 26 Momfa mfewano kronkron nkyiakyia anuanom nyinaa.+ 27 Mehyɛ mo wɔ Awurade mu sɛ monkenkan krataa yi nkyerɛ anuanom nyinaa.+ 28 Yɛn Awurade Yesu Kristo adom+ nka mo.